आज हरिशयनी एकादशी, जान्नुहोस् यो दिनले तपाईको जीवनमा पार्ने प्रभाव – live 60media
आज हरिशयनी एकादशी, जान्नुहोस् यो दिनले तपाईको जीवनमा पार्ने प्रभाव
काठमाडौं । आषाढ शुक्ल पक्षको एकादशीलाई हरिशयनी एकादशी अथवा देवशयनी एकादशी भनिन्छ । यस दिनमा नेपाल र भारत लगायत विभिन्न मुलुकहरूमा बसोवास गर्ने हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले व्रत राख्नुको साथै एक पर्वको रुपमा मनाउने गर्दछन् । पुराणहरूका मतानुशार भगवान विष्णु यस दिन देखि चार महिनासम्म (चातुर्मास) पातालमा राजा ब’लिको द्वारमा निवास गरेर कार्तिक शुक्ल एकादशीमा फर्कन्छन् । यही प्रयोजनले यस दिनलाई देवशयनी तथा कार्तिकशुक्ल एकादशीलाई प्रबो’धिनी एकादशी भनिन्छ ।
विकिपिडियामा उल्लेख भए अनुसार एकादशीको दिन प्रातःकाल उठेर घरको साफसफाई तथा नित्य कर्मबाट निवृत्त हुने । स्नान गरेर पवित्र जल घरमा छर्कने । घरको पूजा स्थल अथवा कुनै पनि पवित्र स्थलमा प्रभु श्रीहरि विष्णुको सुन, चाँदी, तामा अथवा पितलको मूर्ति स्थापना गर्ने । तत्पश्चात उसको षोड्शोपचार सहित पूजन गर्ने र त्यसपछी भगवान विष्णुलाई पीताम्बर आदिले विभूषित गर्ने । तत्पश्चात व्रत कथा सुन्नु पर्छ । त्यसपछी आरती गरेर प्रसाद वितरण गर्ने । अन्तमा सेतो चादरले ढाकेको गद्दातकिया भएको खाटमा श्री विष्णुलाई शयन गराउनु पर्छ । व्यक्तिलाई यि चार महीनाको लागि आफ्नो रुचि अथवा अभी’ष्टका अनुसार नित्य व्यवहारका पदार्थहरूको त्याग र ग्रहण गर्ने ।
देह शुद्धि या सुन्दरताको लागि परिमित प्रमाणको पञ्चगव्यको, वंश वृद्धिको लागि नियमित दूधको, सर्वपापक्षय पूर्वक सकल पुण्य फल प्राप्त हुनाको लागि एकमुक्त, नक्तव्रत, अयाचित भोजन अथवा सर्वथा उपवास गर्ने व्रत ग्रहण गर्ने ।
आजको दिन के त्याग गर्ने- मधुर स्वरको लागि गुड, दीर्घायु अथवा पुत्रपौत्रादिको प्राप्तिका लागी तेल, शत्रुनाशादिको लागी तिलको तेल, सौभाग्यको लागि मिठो तेल, स्वर्ग प्राप्तिको लागी पुष्पादि भोग, प्रभु शयनका दिनहरूमा सबै प्रकारका मांगलिक कार्य जहाँसम्म हुनसक्छ नगर्ने । खाटमा सुत्ने, झूठो बोल्नु, मां स, मह र अरुले दिएको दहीभात आदिको भोजन गर्नु, मूला, पटोल एवं भण्टा आदिलाई पनि त्याग्नु पर्छ ।
एक पटक देवऋषि नारदजीले ब्रह्माजीसँग यस एकादशीका विषयमा जान्ने उत्सुकता प्रकट गरे, ब्रह्माजीले उनलाई बताए- सत्य युगमा मान्धाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य गर्दथे । उनको राज्यमा प्रजा निकै सुखी थिए । भविष्यमा के हुन्छ, यो कसैलाई थाह थिएन । अतः उनी पनि यस कुराबाट अनभिज्ञ थिए कि उनको राज्यमा शीघ्र भ यं क र अका’ल पर्ने छ ।
उनको राज्यमा पूरै तीन वर्षसम्म वर्षा नभएका कारण अका’ल पर्यो । यस अकालले चारैतर्फ हाहाकार मच्चियो । धर्म पक्षको यज्ञ, हवन, पिण्डदान, कथा-व्रत आदिमा कमी भयो । समस्या परेको समयमा धार्मिक कार्यमा प्राणीको रुचि कहाँ रहन्छ? प्रजाले राजासँग गएर आफ्ना वेद’नाहरू भने ।
राजा त यस स्थितिलाई लिएर पहिले देखि नै दुःखी थिए । उनि सोच्न लागे कि आखिर मैले यस्तो कुन पाप-कर्म गरेंछु, जसको द ण्ड मलाई यस रूपमा मिलीरहेको छ रु फेरी यस क’ष्टबाट मुक्ति पाउने कुनै साधना गर्ने उद्देश्यले राजा सेनालाई लिएर जंगल तर्फ गए । त्यहाँ विचरण गर्दागर्दै एक दिन उनी ब्रह्माजीका पुत्र अं गि रा ऋषिको आश्रममा पुगे र उनलाई साष्टांग प्रणाम गरे । ऋषिवरले कुशल गाथ सोधे । फेरी जंगलमा विचरण र आफ्नो आश्रममा आउनाको प्रयोजन जान्न चाहे ।
तब राजाले हात जोडेर भने -महात्मन्‌! सबै प्रकारले धर्मको पालन गर्दा गर्दै पनि म आफ्नो राज्यमा अका’लको दृश्य देखिरहेको छु । आखिर कुन कारणले यस्तो भइरहेको छ, कृपया यसको समाधान गर्नुस् ।ु यो सुनेर महर्षि अंगिराले भने – हे राजन! सब युगहरू भन्दा उत्तम यही सत्य युग हो । यसमा सानो पा’पको पनि निकै द ण्ड मिल्दछ ।
यसमा धर्म आफ्ना चार चरणहरूमा व्याप्त रहन्छ ब्राह्मणका अतिरिक्त कुनै अन्य जातिलाई तप गर्ने अधिकार छैन । तषाईंको राज्यमा एक शू’द्र तपस्या गरिरहेको छ । यही कारण भएर तपाईंको राज्यमा वर्षा भइरहेको छैन । जबसम्म त्यो काललाई प्राप्त हुन्न, तबसम्म यो अकाल शान्त हुनेछैन । अकाल’को शान्ति उसलाई मा’रेर नै संभव छ ।
किंतु राजाको हृदय एक शू द्र तपस्वीको शमन गर्नलाई तयार भएन । उनले भने -हे देव म उसलाई मा री दिउँ, यो कुरा मेरो मन स्वीकार गरिरहेको छैन । कृपा गरेर तपाईं कुनै अरु उपाय बताउनुहोस् । महर्षि अंगिराले भने – आषाढ महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशीको व्रत गर्नु । यस व्रतका प्रभावले अवश्य नै वर्षा हुनेछ ।
राजा आफ्नो राज्यको राजधानी फर्कि आए र चारै वर्णहरू सहित हरिशयनी एकादशीको विधिपूर्वक व्रत गरे व्रतका प्रभावले उनको राज्यमा मूस’लधार वर्षा भयो र पूरा राज्य धनधान्यले परिपूर्ण भयो ।
विशेषगरी पद्म महापुराणमा हरिशयनी एकादशीको व्याख्या गरिएको छ । स्वर्गमोक्षप्रदा ह्येषा शरीरारोग्यदायिनी। कलत्रसुतदा ह्येषा धनमित्रप्रदायिनी।। न गङ्गा न गया राजन् न च काशी च पुष्करम्। न चापि कौरवं क्षेत्रं पुण्यं भूपहरेर्दिनात्।।
अर्थात् एकादशीको व्रत विधिवत् रुपमा बसेमा स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्य, सुभा’र्या तथा उत्तम पुत्र प्राप्तिका साथै सदैब लक्ष्मीको साथ रहिरहने उत्तम व्रत नै एकादशीको व्रत हो भनेर भनिएको छ ।
हरेक वर्ष आषाढ शुक्ल पक्षको एकादशी देखि भगवान् विष्णु चार महिनाका लागि पाताललोकमा गई राजा बलिको ढोकामा निवास गर्ने हिन्दु शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ । आजका दिनदेखि कार्तिक शुक्लपक्षको एकादशीबाट मात्रै फर्किएर पुनः वैकुण्ठमा आउने पुराणहरुमा उल्लेख गरिएको छ ।यसैलाई नै चौमासा अर्थात आषाढ शुक्ल पक्षदेखि कार्तिक शुक्ल पक्षको एकादशी ठुली एकादशी सम्मलाई चौमासा व्रत भनेर भनिएको छ । शास्त्रका अनुसार चौमासा भरि विवाह लगायतका कुनैपनि ठूला शुभकार्य गर्न नहुने शास्त्रमा उल्लेख छ ।
← ३ दिनमै ८ करोडले हेरेको भिडियोः सुशान्तसंग ब्रेकअप त भयो तर माया टुटेन
अस्ट्रेलियामा चक्कु लिएर लुटेरा दौडाउने नेपाली पवित्रा कार्की घटनाबारे के भन्छिन् ? →